Ukupakisha - I-Delta Engineering Belgium
I-Delta Engineering inikeza uhla oluphelele lwemishini yokupakisha.
Bheka futhi eyethu imihlahlandlela yemishini yokupaka ukuthola isisombululo osifunayo.
Ukugoba ikusasa lokupakishwa kwamabhodlela. Izindleko zokufaka imithwalo zimbalwa zingu-20% wezindleko zokupakisha amakhadibhodi kanye nokwehlisa abasebenzi kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, ukugabha kuyindlela ehlanzeke kakhulu yokupakisha: akukho ukuthintana ngokomzimba ngomkhiqizo osuphelile futhi akunangozi yokungcola kwamakhadibhodi.
Yonke imishini yethu yokubeka, ingaphakathi kwezilungiselelo zayo, ikwazi ukukhiqiza ubude obuhlukahlukene bokupakisha nobubanzi ukuze ikwazi ukuqina ngokuqina kwepallet. Zenzelwe nokuthi zisingathe amabhodlela anzima futhi zenze ukuguqulwa okuguqukayo komkhiqizo okusheshayo.
Funda kabanzi …
Eduze kwezikhwama zethu ungasebenzisa ngokuzikhethela imigudu yethu yokuncipha ukunikeza ukuzinza okuningi ezikhwameni.
Ukupakisha ithayela kusalokhu kuyindlela ejwayelekile kakhulu yokupakisha amabhodlela epallet. I-Delta Engineering inikeza uhla oluphelele lwamaphakethe wetiyi, okulula ukulujikeleza nokushintsha ngaphezulu. Siphinde sinikeze ngezinketho eziningi ezibanzi zokuphatha amabhodlela anzima kakhulu. Wonke umgibeli wethu wethreyi angafakwa amandla okonga isikhala nomhloli ovuzayo wezomnotho.
Uhla oluphelele lwama-palletizer luyatholakala, ukusuka kuma-semi-automatic kuya kuma-unit azenzakalelayo aphelele. Ukufaka iziqukathi ezifakwa emgqonyeni noma ukupakisha amabhodlela angenalutho emathiyini, kuma-hoods (emathileyi ngezindebe eziseceleni phansi), kumashidi acwebile, ngesigamu noma kumathileyi agcwele. Amayunithi agcwele ngokuzenzakalela angenza ama-pallets aze afike ku-3.1m.
Ama-Palletizer & depalletizer
Thola ukubeka kwethu okuguquguqukayo & amayunithi wesikhathi esizayo angasetshenziswa ukubeka amathreyi, izikhwama, izingqimba nezembozo eziphezulu.
Izitolo zokugcina amathayela
Amayunithi ahlukene atholakala ngokuhlanganiswa ukuthola imigqa yokugcwalisa othomathikhi egcwele.
Ukwahlukanisa umgibeli ongenayo ongu-1 ufike ku-6 abadingisi abaphumayo.
Amayunithi okufaka amabhodlela angenalutho emabhokisini amakhadibhodi. Ngokukhetha amabhokisi angafakwa ngokuzenzakalela noma ahlanganiswe.
Ukupakisha amabhodlela ngendlela elawulwayo emabhokisini noma kuma-silos agobekayo.